Nairobi Oo Noqotay Magaalada Lixaad Ee Ugu Hodansan Afrika | Haqabtire News
September 18, 2018 - Written by Warbaahinta Haqabtire
Nairobi:-(HTN) Magaalada Nairobi ayaa ah magaalada ugu hodansan bariga Afrika, iyo magaalada lixaad ee ugu qanisan qaaradda Afrika, marka laga soo tago magaalooyinka Durban, Cape Town, Qaahira, Lagos iyo Johannesburg, sida lagu sheegay warbixin cusub.
Daraasaddan oo ay si wadajir ah waddanka Mauritius uga soo saareen hay’adda New World Wealth iyo bangiga AfrAsia ayaa lagu sheegay in lacagta sida gaarka ah loo leeyahay ee Nairobi taalla ay qiyaasteeda tahay 5.4 Tirilyan oo shilin.
Sida lagu sheegay daraasadda, Nairobi ayaa kor ugu kacday dhaqaalaha ka soo xarooda adeegyada dhinaca maaliyadda, ganacsiga, dalxiiska, badeecooyinka sida dhakhsada ah loo iibsado, adeegyada isgaarsiinta, guryaha iyo dhismaha.
Nairobi ayaa soo jiidata dadka dhaqaalaha badan heysta ee ka sameysta ganacsiyada iyo maalgalinta, halka Mombasana lagu xusay iney hoy u tahay Hoteellada iyo maal gashiga xarumaha heerka sare ah, taasoo ay la jiraan xeebeheeda qaaliga ah iyo waliba dhismeyaasheeda aadka loo xiiseeyo ee dunida looga aqoonsanyahay iney yihiin dhaxal hore oo taariikheed.
Maal qabeennada dhaqaalaha badan heysta ee maalgashada qeybaha kala duwan ee ganacsiga isla markaana iibsada dhulka ayaa Nairobi ka dhigay iney noqoto magaalada ugu hodansan guud ahaan gobolka Bariga Afrika.
Lacag dhan 190,000 oo shilin ayaa lagu qiyaasay inuu Nairobi ka joogo dhul hal mitir oo laba jibaaran ah, halka Mombasana lagu qiyaasay halkii mitir inuu ka yahay 170,000 oo shilin.
Magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania ayaa lacagta sida gaarka ah loo leeyhay ee taalla lagu sheegay 2.5 tirilyan oo shilin, waxaana ku soo xigta magaalada Kampala ee dalka Uganda oo ay taallo 1.6 tirilyan oo shilin oo si gaar ah loo leeyahay, halka Mombasa ay hoy u tahay 800 oo bilyan oo shilin oo inteeda badan lagu maal gashaday xarumo kala duwan oo dhinaca nasashada iyo dalxiiska ah.
Lahaanshaha sawirkaREUTERSImage captionSharciga maalgashiga ayaa gacan ka gaystay in caasimaddu ay dhaqaale ahaan sare u kacdo.
Hannaanka sharci ee dowladda Kenya ay u dajisay Nairobi oo ah mid u fududeynaya maal qabeennada Afrika iney yimaadaan magaalada, ayna si sahlan u maalgashadaan, ayaa gacan weyn ka geystay iney dhaqaale ahaan sare u kacdo caasimadda Kenya.
Hase ahaatee, arrimaha siyaasadeed ee magaalada ka jira ayaa wiiqay horumar intaas ka ballaaran oo ay dhaqaale ahaan horay ugu sii tallaabsan lahayd magaalada.
Sannadkii la soo dhaafay ayaa laga diiwaan galiyay Nairobi sare u kacii maalgashi ee ugu hooseeyay gobolka oo boqolkiiba labo ah.
Xaddiga maalgashi ee magaalooyinka caasimadaha u ah Uganda iyo Rwanda ayaa sare u kacay boqolkiiba lix, halka magaalada ugu weyn Tanzania uu dhaqaaleheeda dhinaca maal gashiga sannadkaan kor u kacay boqolkiiba shan.
Daraasaddan ayaa lagu qeexay in shaqsiyaadka dhaqaalaha heysta ee ku sugan bariga Afrika ay daneeyaan iibsashada dharka naqshadeysan, gawaarida dhif iyo naadirka ah Kenya, gaar ahaan gaariga nooca la yiraahdo Porsche, iyo sidoo kale diyaaradaha helikobtarrada iyo kuwa kale ee sida gaarka ah loo leeyahay.
Siyaasiyiinta ayaa waayadii dambe iyagana kordhiyay soo iibsashada diyaaradaha qumaatiga u kaca.